Cubot X20 Pro ga - abụ ama nwere ihe ijuanya okpukpu atọ nke igwefoto igwe | Gam akporosis
Cubot X20 Pro ga-abụ ama na ihe ijuanya okpukpu atọ nke igwefoto
Chineselọ ọrụ China Cubot nwere njedebe na-abịa n'ihu nke ezigbo arụmọrụ na aka. Nke a bụ X20Pro, smartphone nke ga - eji modul foto n'azụ dị ka akụkụ anọ - nke yiri ya Pixel 4- yana igwefoto atọ dị na ya, nke a ga - ejikọ ọnụ yana ọkụ ọkụ.
Ekwentị ga-abịa na otu n'ime ndị nrụpụta ike nke Mediatek dị taa. o juputara na njirimara na nkowa ndi ozo ka ha dabaa na ikpo okwu a. All nkọwa nke ọnụ na-ọkade ebe a.
Ihe niile gbasara Cubot X20 Pro na-abịa
A ga-emepe smartphone ọzọ site n'aka ndị nrụpụta na ahịa na a 2.5-inch diagonal 6.3D ihuenyo na nha 19.5: 9 na FullHD + mkpebi nke 2,340 x 1,080 pikselụ. Dabere na otu ụlọ ọrụ ahụ, nha ihuenyo / ahụ ruru 92.8%, nke dị ịrịba ama n'ezie; ekele nke a, akụkụ dị n'akụkụ ihuenyo ga-adị gịrịgịrị. Anyị na-ekwu okwu n'ụzọ doro anya banyere ekwentị zuru ezu Fullview smartphone.
Akụkụ nke Cubot X20 Pro bụ 157.1 x 74.6 x 8.1 mm, ebe batrị nke ekwentị na-eburu bụ 4,000 mAh. N'ịbụ ndị nwere nghọta, anyị na-aghọta na ọkpụrụkpụ nke Cubot X20 Pro ka dị obere, n'agbanyeghị eziokwu ahụ nwere ikike batrị 4,000 mAh.
N'aka nke ọzọ, dabere na ngalaba foto nke ọnụ ya nwere, nhazi igwefoto atọ nwere Ihe mmetụta 12 MP, ihe omimi 350 MP Sony IMX20 sub-sensor na 8 MP 125 Celsius obosara oghere sara mbara, Mgbe n'ihu enwere 214 MP Sony IMX13 shutter. N'aka nke ya, dị ka anyị na-egosi, a kwadebere ya na Mediatek Helio P60, ebe nchekwa RAM 6 GB, oghere nchekwa 128 GB ma na-agba gam akporo Pie.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Cubot X20 Pro ga-abụ ama na ihe ijuanya okpukpu atọ nke igwefoto
Ihe ngosi 10 + 5G nke Galaxy bụ okpueze dị ka ekwentị nwere igwefoto kachasị mma
Nkọwapụta nke Realme 5 Pro apụtawo ma gwa anyị banyere etiti dị ike